Nke kachasị mma nke Juan Gómez Jurado
Akwụkwọ m tụrụ aro nke Juan Gómez Jurado dere. Nyocha dị mkpa maka onye ode akwụkwọ a kacha mma. Ndụmọdụ iji nwee ọmarịcha ọrụ gị.
Akwụkwọ kacha mma 3 nke Juan Gómez Jurado dere
Mgbe ịchọrọ ịmata ihe kachasị ọhụrụ site na Juan Gómez Jurado, ị nwere ike ịchọta akwụkwọ akụkọ ya mgbe niile, nke usoro usoro ọdịdị siri ike nyere iwu, HERE. Ọ bụrụ na enwere onye edemede na Spain nwere ọgụ siri ike na Javier Sierra ijide ọkọlọtọ nke e buliri elu nke nnukwu ụdị ihe omimi, nke ahụ bụ Juan ...
White King, nke Juan Gómez Jurado dere
Ezi akụkọ na -enyo enyo na -adị mma mgbe ngwụcha ha maara ka esi ejikọ mmechi nke ọ bụla na azụmaahịa na -agwụbeghị, mana yana ọkpụkpọ oku yiri ya ka ọ dị elu. Ị nwere ike ikpebi otu nkata n'otu oge ị nwere ike rụtụ aka n'ihe nwere ike ịbụ ma ọ bụ ihe ...
Akụkọ banyere onye ohi, nke Juan Gómez Jurado dere
Mgbe ewepụtara mbipụta akwụkwọ ndị ahụ naanị afọ 10 ka mbipụta mbụ ha gasịrị, ọ na -eme dịka ọ dị na nnukwu egwu dị iche iche, na ndị na -eto eto na -eto eto na -arịọ maka ihe karịrị ihe ewepụtara. Banyere mbipụta platinum na usoro ndị ahụ niile nke ...
Anụ ọhịa wolf, nke Juan Gómez Jurado dere
Otu n'ime akwa ụta ole na ole m chọpụtara na ụfọdụ ndị na -agụ akwụkwọ akụkọ Juan Gómez Jurado gara aga, Reina Roja bụ njedebe mepere emepe, yana ajụjụ ya na -echere na -ekwu maka ọkwa dị iche iche ... Mana ọ bụ otu a ka ọ kwesịrị ịdị. -anụ ọhịa wolf na ikekwe ọbụlagodi frij ka dị ...
Red Queen, nke Juan Gómez Jurado dere
Omume kachasị mma nke ụdị ihe a na -enyo enyo bụ ikike nke onye edemede idebe nguzozi n'etiti ihe omimi n'onwe ya na esemokwu mmụọ nke na -atụ egwu n'etiti amaghị ama ma ọ bụ ihe a na -atụghị anya ya. Na Spain, otu n'ime ndị kacha nwee ike idobe akụkọ ya na nkwekọrịta dị n'etiti ...